Jadwalka Jadwalka Izmir Konak Tram iyo Khariidadda | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirJadwalka Jadwallada Izmir Konak Tram iyo Khariidad
20 / 12 / 2019 35 Izmir, tareenka, Turkish Aegean, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, TURKEY, taraamka
Jadwalka Jadwalka Jadwalka Izmir Konak Tram iyo Khariidadda: Konak tram, waxyar ka hor T2, waxaa dhistay dowladda hoose ee Izmir Metropolitan iyadoo qeyb ka ah Tram Izmir 19 istaag ve 12,8 kiiloomitir khadka tareenka dheer. Khadadka taraamku wuxuu ka bilaabmayaa Fahrettin Altay wuxuuna ku dhammaadaa Halkapınar Center Transfer. Waxaa jira 21 gaadiid oo saaran wadada tareenka.
Dhismaha wadada laamiga ee Konak ayaa bilaabatay Noofembar 2015. Intii lagu guda jiray howlaha dhismaha khadka tareenka, waxaa lagahelay astaamaha taariikhiga Aarir Eşref Boulevard. Zmir No: 1 Gudiga Dhaqanka iyo Dhaqanka dabiiciga ah waxay go’aansadeen inay matxafka u gudbiyaan dukumiintiyada iyo ilaalinta tiirarka taariikhiga ah.
Lugta labaad ee mashruuca Tram Izmir, oo ay hirgalisay İzmir Metropolitan Municipal iyadoo la maalgaliyay ku dhawaad ​​450 milyan oo TL, ayaa bilaabatay Maarso 2, 24 khadka T2018 (Konak tram). Ku dhawaad ​​92.000 oo rakaab ah ayaa maalin walba la dhoofiyaa Konkoonka taraamka maalin walba
Wadada Konak Tram
Khadka tareenka wuxuu ka bilaabmayaa Fahrettin Altay wuxuuna kusii socdaa wadada Mustafa Kemal Sahil Boulevard. Ka dib markii uu gudbay Konak Pier, kadib Cumhuriyet Boulevard, wuxuu gaadhay Gazi Boulevard ka dibna Poet Eşref Boulevard wuxuuna raacay Ali Çetinkaya Boulevard iyo Ziya Gökalp Boulevard. Khadkan ka sii socda Atatürk Street wuxuu u qaybsan yahay laba mar hore horteeda Xarunta Tareenka ee Alsancak. Jihada bixitaanku waxay gaadhaa Halkapınar oo ka socota Şehitler Street halka jihada soo laabashadu ay ka bilaabmaysaa Halkapınar waxayna raacdaa Liman Street. Waa suurtagal in laga wareejiyo İzmir tramway loona wareejiyo Halkapınar, Konak iyo Fahrettin Altay iyo İZBAN loona wareejiyo saldhigyada Alsancak iyo Halkapınar. Safarka qadka wuxuu socdaa 41 daqiiqo bilow ilaa dhamaad.
Goobaha Konak Tram
Fahrettin Altay 1 madal jasiirad Bas, Mit
Üçkuyular 2 meelood dhinac Cajiin, Ferry, Bas
Ahmed Adnan Saygun Xarunta Farshaxanka 2 meelood dhinac no Muuqaalka masraxa
Güzelyali 2 meelood dhinac no Muuqaalka masraxa
Göztepe 2 meelood dhinac steamship Muuqaalka masraxa
Sadıkbey 2 meelood dhinac no Muuqaalka masraxa
buundada 2 meelood dhinac no Muuqaalka masraxa
karantiil 2 meelood dhinac steamship
Karatas 2 meelood dhinac no
Muuqaalo 2 meelood dhinac Ferry, Bas, Subway Izmir Clock Tower, Suuqa Kemeralti
Gazi Boulevard 2 meelood dhinac no Suuqa Kemeralti
Dugsiga Sare ee Kültürpark-Atatürk 1 madal jasiirad no Dugsiga Sare ee İzmir Atatürk, Kültürpark
Masaajidka Hocazade 1 madal jasiirad no Cyprus Martyrs Street
Hoolka Ciyaaraha Atatürk 2 meelood dhinac no
Alsancak Station 1 madal jasiirad Gaadiidka TCDD, İZBAN, Bas Port of Izmir
garoonka 1 meelood dhinac no Kaliya taraamyada ku jira Halkapınar halkaan ku jooji.
gaaska dhuxusha 1 meelood dhinac no Kaliya taraamyada taga Fahrettin Altay halkaan ku jooji.
jaamacad 1 meelood dhinac no Kaliya taraamyada ku jira Halkapınar halkaan ku jooji.
Halkapınar 1 madal jasiirad Gaadiidka TCDD, İZBAN, Metro, Bas Kaydka ayaa ku yaal bartan.
Adeegga tram Konak waxaa la heli karaa 21 gaadiid. Gawaarida taramikada ee laga sameeyay xarumaha shirkadda South Korea ee Hyundai Rotem ee Adapazarı waxay dhererkoodu gaarayaan 32 mitir iyo awooda fadhi ee 48 kursi oo ah guud ahaan 285 qof.
Waqtiga Konak Tram
Khadadka tareenka ee Konak Tramway wuxuu shaqeeyaa maalmaha shaqada. Saacadaha joogtada ah ee shaqada: 00:00 - 23:52
Monday 00: 00 - 23: 52
Tuesday 00: 00 - 23: 52
Wednesday 00: 00 - 23: 52
Thursday 00: 00 - 23: 52
Friday 00: 00 - 23: 52
Saturday 00: 00 - 23: 52
Sunday 00: 00 - 23: 52
Jadwalka Konak Tram Fee
Lacagta Izmir tram fare waxaa la bedelay go'aankii ay qaateen Golaha Deegaanka Magaalada Izmir ka dib doorashadii dawladaha hoose ee 2019. Wax-ka-beddelkaani ma daboolayo oo keliya taraamka laakiin sidoo kale dhammaan gaadiidka dadweynaha. Iyada oo khidmadii ardayda laga dhimay, tigidhada kale ayaa la kordhiyay. Qiimaha gaadiidka dadweynaha transportationzmir waa sidan soo socota;
Qiimaha tigidhada oo buuxa: $ 3,56
Qiimaha tigidhada ardayda: 1,64 TL
Qiimaha tigidhada macallimiinta: 3,00 TL
Qiimaha tigidhada 60 sano: 3,00 TL
Khariiddada Konak Tramvay
Ineszmir Mashruuca Xirmooyinka Xirmooyinka Magaalada Metropolitan Üçkuyular - Konak - Alsancak…
Balaadhinta iyo Karşıyaka Wadada Konak ayaa isbadalay Mashruuca Lram
Tareenka Adventure Turkiga ayaa maanta ka badan shalay